Iyiphi indlela engcono yokwenza uluhlu lwama-Amazon uluhlu lwabathengisi be-novice?
I-Amazon iyona injini ephezulu ye-injini yokukhangela, ubuncinane ojongene neentengiso zentengiso kwi-intanethi nayiphi na imikhiqizo onokuyicinga. Kwaye kungumthengisi we-novice ngaphaya koko, kufuneka uwazi imithetho esemqoka yomdlalo ukuze ukuhlala kuloo ndawo yemakethe ephakamileyo kunokuba lula kuwe. Kwaye indlela eyona nto yokubeka indawo eqinile kwinkqubela yakho yorhwebo kukuba ukwandise uluhlu lwakho lwama-Amazon olujoliswe kumagama athile okujoliswe kuyo ukuze iziveliso zakho ziboneke ngokubonakalayo kwimveliso ye-SERPs. Yingakho ngaphantsi ndiza kukunika iingcebiso ezimfutshane kunye neendlela zokulungisa uluhlu lwama-Amazon njengeprogram, nokuba ukhangeleka njengomthengisi wasesikhundleni somthengisi othabatha amanyathelo akhe okuqala ukuba uphumelele umthengisi.
Indlela yokwenza ngcono ii-Amazon Listings njengePro
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, makhe sijamelane nayo - ukuhlaziywa kwe-Amazon ngokuqhubekayo kuqala ngokubunjwa kwiphepha leenkcukacha ngokuthe ngqo. nayiphi na into oyithengayo - cheap hosting services canada. Ngoxa udala ezi zinto zephepha lakho lenkcazo yemveliso, kubaluleke kakhulu ukuba uchaneke kodwa ngokupheleleyo ukubhalwa kwiphepha lomkhiqizo onyanzelisayo oza kubakhokelela ngamnye kumthengi ukuba enze ukuthengwa kokugqibela ngokukodwa, kwaye akukho ndawo. Yingakho ndincoma ukufaka izinto eziphambili zekhasi lakho leenkcazo zeemveliso ukwenzela ukwandisa uluhlu lwakho lwe-Amazon, ngale ndlela ilandelayo:
Isihloko somkhiqizo - kufuneka sibe sisigxina kunye. Yenze ibe nechanekileyo kwaye ibhenkce kwi-style jikelele ye-Amazon yezihloko zeemveliso ngokunokwenzeka. Ukwenza njalo, khumbula-isihloko sakho semveliso yindawo efanelekileyo yokusekela amagama akho asemqoka ephambili kunye nemigca yokukhangela imilenze emininzi ekunciphiseni umyalelo wokubaluleka kwawo. Kodwa ke, phawula ukuba unyanzeliswa kakhulu ukuba ugweme nayiphi na amagama angundoqo aphindaphindiweyo asetyenziswa kwisihloko sakho somkhiqizo, kunye nakwamanye amacandelo ephepha lomkhiqizo onayo.
Amanqaku e-bullet - eli candelo lekhasi leenkcazo zemveliso ngokuqhelekileyo lwakhiwa ngeentetho ezihlanu zokuhambisa. Yibanikezele kuphela ulwazi olubaluleke kakhulu ukuze bachaze iimpawu eziphambili / iinzuzo zento yakho ekuthengisweni. Enyanisweni, uluhlu "olufanelekileyo" lweenhlamvu luhloselwe ukubuyisela kwakhona ulwazi olubalulekileyo oluye lwabhengezwa kwisihloko sakho semveliso.
Inkcazelo yeeMveliso - ngokwenene, isigaba esongezelelweyo soluhlu lwakho lweebhola. Ngaloo ndlela, inkcazo yakho yemveliso isetyenziselwa ukugqamisa iimpawu eziphambili zezinto ezithengiswayo, ezixhaswe ngezinto eziqhelekileyo zokusetyenziswa kwansuku zonke / ukugcinwa. Cinga ukubandakanya apha ezi zinto zilandelayo: imilinganiselo yemveliso, ubudala / ubunqanaba bekhono elifanelekileyo, okuqukethwe kunye neemeko zomkhiqizo, isimo semvelaphi, njalo njalo. Kodwa ke, phawula ukuba akufanele udibanise apha ulwazi malunga nomenzi kunye nexabiso, okanye nayiphina idatha yeenjongo zokuphromotha ngokuvulekileyo.
Imifanekiso yeMveliso - imele imifanekiso ebonakalayo enikeza inkcazo yemveliso eyongeziweyo kunye nomboniso wayo jikelele uveza zonke iinkalo zemisebenzi yayo eyintloko kunye nezindlela zokusetyenziswa. Eli candelo linconywa ukuba libandakanye imifanekiso emithandathu yemveliso okanye into ephosakeleyo, ekufuneka iqiniseke ngokugcwele kubo bonke abathengi abanokucinga ukuba benze ukuthenga kunye nawe.